ख्याल गर्नुस् ब्लड प्रेशर पीडितलाई हस्तमैथुन कति जोखिमयुक्त ? | Rajmarga
हस्तमैथुनलाई स्वस्थ यौन जीवनको एउटा जरुरी हिस्सा मानिन्छ । तर के उच्च रक्तचापको समस्या भएकाहरुले यसो गर्नु उचित छ ?
के तपाईलाई लाग्छ कि उच्च रक्तचापमा हस्तमैथुन गर्दा तपाई कुनै समस्यामा फस्न सक्नु हुन्छ ? उच्च रक्तचाप र हस्तमैथुनबीच के सम्बन्ध छ त ?
एक जना स्वस्थ व्यक्तिका लागि जब हस्तमैथुनपछि इजुक्युलेट हुन्छ तब त्यतिबेला उसको रक्तचाप बढ्ने गर्दछ । जब तपाई सेक्स वा हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ तब तपाईको शरीरले त्यही हर्मोन रिलिज गर्दछ जुन तनावका समयमा रिलिज गर्दछ । त्यही हर्मोनका कारणबाट हस्तमैथुन वा सेक्सका समयमा तपाईको हर्ट रेट र ब्लड प्रेशर बढ्दछ । इजेक्युलेशनपछि कम्तीमा पनि १० मिनेटसम्म तपाईको रक्तचाप बढिरहन्छ ।
हस्तमैथुनलाई रक्तचापको कारण मान्न सकिन्न । यद्यपि हस्तमैथुन गर्दा रक्तचाप केही समयका लागि अवश्य बढ्दछ । तर यो रक्तचापको मुल कारण होइन । तर तपाईलाई पहिलादेखि नै हाइपरटेन्शन वा रक्तचापसम्बन्धी समस्या छ भने हस्तमैथुनबाट टाढै रहनुस् ।
यदि तपाईमा हाइपरटेन्शनको समस्या छ र तपाईलाई यसबारेमा थाहा छैन भने तपाई पक्का पनि उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ । यस्तो भएको अवस्थामा कार्डियक अरेस्ट, हृदयघात, वा फेरि वास्कुलर अट्याक हुन सक्दछ ।
माथि उल्लेख गरिएको कुराबाट डराइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । यसप्रकारका घटना निकै रियर मान हुन्छ कि हस्तमैथुनका कारण हृदयघात जस्ता समस्या आओस् । डराउनुको साटो तपाई आफ्नो दिनचर्यामा केही विशेष फिजिकल एक्टिभिटिजमा समावेश भएर उच्च जोखिम कम गर्न सक्नु हुनेछ । एजेन्सी
Previous post: नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र, लागत करिब दुई खर्ब
Next post: राजकुमार ह्यारी र मार्कल यसरी विवाह बन्धनमा बाँधिए, देशभर चियापान कार्यक्रम